ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် လူထုလှုပ်ရှားမှု မှာ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ G Fatt – Cele Lover
ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် လူထုလှုပ်ရှားမှု မှာ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ G Fatt
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..အဆိုတော် G Fattဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလက်ရှိ မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားတွေမှာ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ရက်ဆက် မမောနိုင် မပန်းနိုင်အောင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရုံတင်မကဘဲ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း Defense Team မှ လူငယ်တွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆုံးက နေထွက်ကာ ကာကွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်း တစ်ခုရေးသား ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒီကနေ့မှာဘဲ ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ကျ ဆုံးသွားခဲ့ တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေပြီး သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သွားနှင့်တော့ ညီလေး ဖီဖီရေ . ၁၆ /၃ အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်ညီလေး ။
အထက ၂ သပိတ်ကြောင်းတူတူထွက်ဖူးတဲ့ညီလေး … မင်းအစ်ကို ခင်ရှင်းလေးတော့ ပေါက်ကွဲနေရော့မယ်ကွာ ..ခင်ရှင်းလေးရေ ကိုကြီးတို့ မင်းညီအတွက် အဆုံးထိတိုက်မှာပါကွာ မင်းဘယ်လောက်နာကျင်နေမလဲ ငါခံစားမိပါတယ် စတွေ့တည်းက တက်ကြွပြီး ရိုးသားတဲ့ညီငယ်တွေနဲ့ အတူတူ ရုန်းခွင့်ရတာ ငါဂုဏ်ယူပါတယ် ဒီနေ့တော့ ငါ ငိုင်ကျသွားတော့တာပါပဲကွာ .. ငါတို့မင်းအတွက် တာဝန်ကျေစေရမယ်ညီလေး ..
ဒီအရေးတော်ပုံမှာ မင်းရိုက်ပေး တဲ့ဓါတ်ပုံတွေငါတင်ဖူးပေါ့ကွာ ..ထ၂ သပိတ်ကြောင်းမှာ မင်းရှေ့က ပြေးလိုက် ပုံရိုက်လိုက် ငါမျက်လုံးထဲကမထွက်ဖူးကွာ .. မင်းက ၁၆ရပ်ကွက်ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သူရဲကောင်းပါညီလေး ငါဦးညွှတ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ညီတွေလဲ နောက်နေ့တွေဂရုစိုက်ပါကွာ ငါတို့ထပ်မပေးပါရစေနဲ့တော့ ငါလည်း ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကွ ငါရပ်ကွက်ထဲ အတူမရှိပေးနိုင်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ။
ငါတတ်နိုင်တာ အကုန်ဝင်ကူပါ့မယ် ကွာ ။ အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…..အဆိုေတာ္ G Fattဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုလက္ရွိ မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားေတြမွာ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ေအာင္ လမ္းေပၚထြက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေန႐ုံတင္မကဘဲ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း Defense Team မွ လူငယ္ေတြနဲ႔အတူ ေရွ႕ဆုံးက ေနထြက္ကာ ကာကြယ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ကလည္း G Fatt ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္း တစ္ခုေရးသား ေဝမွ်ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ဒီကေန႔မွာဘဲ ခ်စ္ခင္ရတဲ့ ညီေလးတစ္ေယာက္က် ဆုံးသြားခဲ့ တဲ့အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေနၿပီး သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေလးေတြကို ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ” သြားႏွင့္ေတာ့ ညီေလး ဖီဖီေရ . ၁၆ /၃ အတြက္ငါဂုဏ္ယူတယ္ညီေလး ။
အထက ၂ သပိတ္ေၾကာင္းတူတူထြက္ဖူးတဲ့ညီေလး … မင္းအစ္ကို ခင္ရွင္းေလးေတာ့ ေပါက္ကြဲေနေရာ့မယ္ကြာ ..ခင္ရွင္းေလးေရ ကိုႀကီးတို႔ မင္းညီအတြက္ အဆုံးထိတိုက္မွာပါကြာ မင္းဘယ္ေလာက္နာက်င္ေနမလဲ ငါခံစားမိပါတယ္ စေတြ႕တည္းက တက္ႂကြၿပီး ႐ိုးသားတဲ့ညီငယ္ေတြနဲ႔ အတူတူ ႐ုန္းခြင့္ရတာ ငါဂုဏ္ယူပါတယ္ ဒီေန႔ေတာ့ ငါ ငိုင္က်သြားေတာ့တာပါပဲကြာ .. ငါတို႔မင္းအတြက္ တာဝန္ေက်ေစရမယ္ညီေလး ..
ဒီအေရးေတာ္ပုံမွာ မင္း႐ိုက္ေပး တဲ့ဓါတ္ပုံေတြငါတင္ဖူးေပါ့ကြာ ..ထ၂ သပိတ္ေၾကာင္းမွာ မင္းေရွ႕က ေျပးလိုက္ ပုံ႐ိုက္လိုက္ ငါမ်က္လုံးထဲကမထြက္ဖူးကြာ .. မင္းက ၁၆ရပ္ကြက္ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ သူရဲေကာင္းပါညီေလး ငါဦးၫႊတ္ပါတယ္ ။ က်န္တဲ့ညီေတြလဲ ေနာက္ေန႔ေတြဂ႐ုစိုက္ပါကြာ ငါတို႔ထပ္မေပးပါရေစနဲ႔ေတာ့ ငါလည္း ဘာေျပာရမွန္းကိုမသိေတာ့ပါဘူးကြ ငါရပ္ကြက္ထဲ အတူမရွိေပးႏိုင္ခဲ့တာ ေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ ။
ငါတတ္ႏိုင္တာ အကုန္ဝင္ကူပါ့မယ္ ကြာ ။ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးပါေစ ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္…။
Previous Article မမို့မို့အောင်ကို မိသားစုတွေ့ခွင့်နဲ့ ရှေ့နေအကူအညီလိုအပ်နေကြောင်း မိသားစုဝင်တယောက် အကူညီတောင်းခံ..
Next Article မျက်ကြည်လွှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း မ‌ရွေး လှူပါမည် ဆိုတဲ့ ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းမလေး မဇင်မာအောင်